Jamaika : 46 Taona ny Fahaleovantena (2008) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2018 6:50 GMT
[Mankany aminà lahatsoratra amin'ny teny anglisy ny rohy rehetra]
[Talohan'ny nahazoany ny medaliny nandritra ny Lalao Olaimpika tao Pekin], nankalazain'i Jamaika ny faha-46 taonan'ny fahaleovantena azony tamin'i Grande-Bretagne ary marobe ireo bilaogera nanamarika io fotoana io tamin'ny famoahana hafatra, toy ny fisaintsainana feno kiana ka hatramin'ny fankalazàna tanaty firavoravoana tanteraka.
Mba hametrahana ity hetsika goavana ity ao anatin'ny vanimpotoany, natomboky ny YardFlex.com tamin'ny fampahatsiahivana fohifohy ny tantara, raha ny Abeng News Magazine kosa namoaka ny lahateny nomanin'ny praiminisitra ho an'ny Fetim-Pirenena, izay ny ampahany dia miresaka ireo fanamby atrehan'i Jamaika ankehitriny:
Nitondra ho aminà toedraharaha samihafa ny 46 taona nodiavina. Nisy fahombiazana, nisy tsy fahatomombanana, nisy fandrosoana niteraka faharisihana ary nisy koa ny setriny nandiso fanantenana. Mila maka fotoana isika handinihantsika ny tenantsika. Tsy maintsy raisintsika ny fanapahankevitra hanorina miainga avy amin'ny fahombiazantsika sy hirotsaka indray amin'ireo kianja izay naharesy antsika…satria tsy tokony ho faty velively io nofinofy sy fanantenana io izay nanainga fanahy antsika nandritra ny fahaleovantena.
Mifanohitra amin'izay, ny bilaogy Stunner's Afflictions, tsy mba nandray anjara tamin'ilay firavoravoana tambabe :
Tsy dia nampientana ahy loatra ny fahaleovantenan'i Jamaika. Takaro tsara izay tiako ambara! Ireharehako ny fireneko ary mahatsapa ny fitiavan-tanindrazana toy ny ankamaroan'ireo Jamaikàna aho. Saingy, raha raisina ny zavamisy ankehitriny eto amin'ny firenenay sy ny dingana vita hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena, dia matetika manontany tena aho raha….izay tokoa, mety ho nandroso kokoa ny firenena raha toa ka mbola niankina tamin'i Grande Bretagne ihany.
Mba hanazavana ny fijeriny, dia ampiany hoe:
Raha amin'ny resaka toekarena, iray amin'ireo reraka indrindra aty Karaiba ny firenenay, avo be tokoa ny tahan'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra, zara raha misy ny tahan'ireo olona nahazo fianarana asa tao anatin'ny fitsitontonganana tsy mitsahatry ny hery mpamokatra, ary tsy lazaina intsony ny tahan'ny fanaovana heloka bevava izay isan'ny henjana indrindra aty amin'ny faritra (sy erantany). Ao amn'ny firenenay, ireo fotodrafitrasa, ny rafitra ara-pitsaràna ary ny fitantanana ara-politika dia tsy misy mampitsiriritra amin'ny ankapobeny.
Ohatra raisintsika ireo nosy, toa ny nosy Cayman, izay tsy nitady fahaleovantena ary dia tafavoaka tsara lavitra noho ny firenenay! Ny fotodrafitrasa any amin-dry zareo dia azo ampilaharina amin'ireo hita any amin'ireo firenena mandroso toa an'i Etazonia, ary ireo olompirenena any aminy dia misitraka hatsaram-piainana izay nofinofy fotsiny ho an'ny maro amin'ny Jamaikàna. Etsy ankilany, nisy ihany koa anefa ireo nosy karaibiana sasany nahazo fahaleovanena ary niroborobo….Nialan'izy ireny ny fotaka mandrevo izay niletehantsika. Ohatra tsara amin'ìzany i Barbade, noho ny toekareny isan'ny iray amin'ny matanjaka indrindra aty Karaiba.
Dia mampanontany tena araka izany hoe inona marina no tena olana ao Jamaika? Maninona isika no tsy tafita?
Dennis Jones, Jamaikàna iray monina any Barbade, mientanentana te-hody any amin'ny firenena niaviany mba hankalaza ny Fetim-Pirenena, anefa dia miaiky ny hoe:
Tao anatin'ny enina amby efapolo taona, afaka nataon'ny firenentsika tsara mihitsy ny nahita ny tena fisandratana. Betsaka no mety hiaro hoe tsy tafita ny fampandrosoana ny firenena, raha raisina hoe ny toekareny, izay mety hiavaka noho ireo fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny fanodinana ireo mineraly, ny fambolena sy fiompiana ary ny fizahantany, dia miezaka mafy ny hamorona harena sy asa sahaza mba hanohanana marina ny ankabeazan'ny mponina.
Na eo aza izany, betsaka ireo dera natolony :
Manana izay azony ireharehana amin'ireo andrimpanjakana ara-politikany ny Jamaikàna. Tena afapo amin'ny zavatra ara-kolontsaina azonay izahay, rariny izany, hatramin'ny nahazoana fahaleovantena, toy ny …gadona reggae, io karazana mozika vaovao io izay anomezantsika voninahitra ny tontolo. Namorona karazam-pinoana vaovao isika, ny Rastafarisma. Ny fifandraisanìireo toejavatra roa ireo dia, mazava loatra, i Bob Marley. Afaka misintona rehareha goavana be isika avy amin'ireo zavabitan'ny mpanao fanatanjahantena eto amintsika. Nahatafavoaka olomanga marobe tamin'ny lalao cricket isika, ilay mpanjakan'ny lalao aty amin'ny faritra. Nampidirintsika ny faritra mba ho anatin'ny laza maharevon'ny baolina fandàka, vokatry ny nahatafita antsika hiatrika ireo dngana famaranana tamin'ny Fiadiana ny ho Tompondaka Erantany, izay tsy misy mihitsy tokony hampitsanga-menatra antsika tamin'ny ekipantsika..
Manana maripamantarana ara-kolontsaina isika ao anatin'ireo sehatry ny faharanitantsaina…ho ahy, voasongon'i «Miss Lou» (Louise Bennett) ireo hafa rehetra. Aty amintsika, hita aty ny hatsaràna sy ny hamanjàna. Tsaroako ny fientanentanana tsapako, nefa aho tamin'izany mbola adolantsento tsy maoty akory tao Londona, rehefa nandre fa ny Oliravina Jamaika (Carol Joan Crawford) no lasa Oliravin'ny Tany 1963, tao Londona indrindra, tao amin'ny Lyceum Hall. Ny zavatra toy ireny no mahatonga ny firenena bitika kely iray ho hita bebe kokoa ao anatin'ny sarintanin'izao tontolo izao.
Vao mainka manamafy izay voalazan'i Stunner ireo fanamarihana momba ireny fahombiazana ireny:
Nahazo fitahiana i Jamaika noho ireo loharanon-karena marobe toy ny kafe tsara indrindra, ny baoksita, ny reggae ary mamiratra noho ny fahitàna betsaka azy eran'izao tontolo izao, azo takarina tsara mihitsy ny antony mahatonga ny firenentsika ho amin'izao toerana misy azy izao. Firenena goavana isika, nomena hery matanjaka, saingy toa tsy haintsika ny mampiasa azy mba hanatsaràna ny toerana misy antsika.
Tsy ataon'i Moppet On The Go, sy Living in Barbados, hahakivy io filazàna io, izy ireo izay mitanisa eto ny tonon'ny Hiram-Pirenena:
Ry Rainay izay an-danitra, alefaso ho anay ny fahalalàna
Omeo anay ny fahendren'ny lanitra
Ampanjakao mandrakizay eto aminay ny Rariny sy ny Fahamarinana
Jamaika, tany tianay
Jamaika, Jamaika, Jamaika, tany tianay
Farany, velom-panantenana ihany ny Stunner's Afflictions :
Tsy maintsy isika manantena fa hihatsara i Jamaika ary ho firenena iray matanjaka kokoa amin'ny faha-47 taonany. Ry Jamaikàna, mirary fetim-pirenena sambatra ho anareo aho, na ao amin'ny firenanao ianao na any ivelany.